.သူက စားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဝေးကနေမုန့်တွေလှမ်းပို့ပေးတဲ့ ချစ်သူလေးကို တနေ့ထက်တနေ့ အချစ်တွေပိုတိုးနေရတဲ့ မင်းသားချော နေဒွေး. – Askstyle
.သူက စားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဝေးကနေမုန့်တွေလှမ်းပို့ပေးတဲ့ ချစ်သူလေးကို တနေ့ထက်တနေ့ အချစ်တွေပိုတိုးနေရတဲ့ မင်းသားချော နေဒွေး.
သူက စားခ်င္တယ္ဆုိတာနဲ႔ အေဝးကေနမုန္႔ေတြလွမ္းပုိ႔ေပးတဲ့ ခ်စ္သူေလးကို တေန႔ထက္တေန႔ အခ်စ္ေတြပုိတုိးေနရတဲ့ မင္းသားေခ်ာ ေနေဒြး…
ေဝဖန္မႈေတြၾကားကေန ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဆက္လက္ရရွိေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးစားေနၿပီး အႏုပညာေလာကတြင္ေနရာတစ္ေနရာ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနသူကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာေလး ေနေဒြးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ အႏုပညာမ်ိဳး႐ိုးမရွိဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ႀကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အားေပးမႈေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ရရွိလာသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနေဒြးကေတာ့ စီးပြားေရးဘက္မွာလည္းတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ လက္ရွိမွာလည္း အခ်စ္ရဆုံး ခ်စ္သူေကာင္မေလးနဲ႔ အတူ ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္နဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်စ္ေရးကို အတူတူေလွ်ာက္လွမ္းေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြကလည္း ေနေဒြးကိုသာမကဘဲ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူေလးကိုပါ အခ်စ္ေတြပိုေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အေနေဝးေပမယ့္လည္း တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ထားရွိတဲ့ေမတၱာတရားေတြကေတာ့ ျမင္ရသူတိုင္းကို အားက်ေလာက္ေစတာ အေသခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူက စားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဝေးကနေမုန့်တွေလှမ်းပို့ပေးတဲ့ ချစ်သူလေးကို တနေ့ထက်တနေ့ အချစ်တွေပိုတိုးနေရတဲ့ မင်းသားချော နေဒွေး…
ဝေဖန်မှုတွေကြားကနေ အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်လက်ရရှိအောင် အားထုတ်ကြိုးစားနေပြီး အနုပညာလောကတွင်နေရာတစ်နေရာ ရပ်တည်လျက်ရှိနေသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး နေဒွေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အနုပညာမျိုးရိုးမရှိဘဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုတွေကို ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရရှိလာသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နေဒွေးကတော့ စီးပွားရေးဘက်မှာလည်းတိုးတက်အောင် လုပ်ငန်းအသစ်တွေ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ လက်ရှိမှာလည်း အချစ်ရဆုံး ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ အတူ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးကို အတူတူလျှောက်လှမ်းနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း နေဒွေးကိုသာမကဘဲ သူ့ရဲ့ချစ်သူလေးကိုပါ အချစ်တွေပိုနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနေဝေးပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားတွေကတော့ မြင်ရသူတိုင်းကို အားကျလောက်စေတာ အသေချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။